ब्राजिलमा को’रोना पुन : भयावह बन्दै, एकै दिन २६ सयबढी संक्रमितको मृ’त्यु ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय समाचारब्राजिलमा को’रोना पुन : भयावह बन्दै, एकै दिन २६ सयबढी संक्रमितको मृ’त्यु !
काठमाडौँ, १३ चैत । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिलमा को’रोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएको छ । त्यहाँ पछिल्लो एक दिन (बिहीबार) मा मात्रै थप ९७ हजार ५८६ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो को’रोना महा मारी फैलिएयता ब्राजिलमा सर्वाधिक दैनिक संक्रमित संख्या हो । वल्र्डोमिटर्सका अनुसार ब्राजिलमा बिहीबार को’रोनाका कारण मृ,त्यु हुनेको संख्या पनि उच्च देखिएको छ ।
त्यहाँ बिहीबार २ हजार ६३९ संक्रमितको नि’धन भएको छ । यससँगै हालसम्म ब्राजिलमा को’रोनाका कारण ३ लाख ३ हजार ७२६ जनाले ज्या’न गु’माइ सकेका छन। यसैगरी त्यहाँ हालसम्म कुल संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड २३ लाख २४ हजार ७६५ जना पुगेको वल्र्डोमिटर्सले जनाएको छ । ती मध्ये १ करोड ७ लाख ७२ हजारभन्दा बढी मानिस सं’क्रमणमुक्त भइसकेका छन् भने १२ लाख ४८ हजार ४९० जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
उता, संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि दैनिक संक्रमित एवं मृतकको संख्या बढिरहेकै छ । त्यहाँ बिहीबार एकै दिनमा ६७ हजार भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १ हजार १६५ जना संक्रमितको मृ,त्यु भएको छ। यसैगरी भारतमा पनि तीव्र रुपमा को’रोना पुनः फैलन थालेको छ । बिहीबार मात्रै त्यहाँ ५९ हजारभन्दा बढीमा सं’क्रमण पुष्टि भएको छ भने २५७ संक्रमितको ज्या’न ग’एको छ । पछिल्लो समय फ्रान्स, पोल्यान्ड, टर्की, इटाली, जर्मनी लगायत युरोपेली देशमा पनि को’रोनाका सक्रिय संक्र’मितहरु बढ्दै गएका छन् ।